လူသားတို့ အတွက် အဆိုးယုတ်ဆုံးသော တ၇ားတွေ မို့ လို့လူမှန်၇င် အသိဥာဏ်၇ှိ၇င် –မှားတယ်လို့ ၇ဲ၇ဲ ပြောနိုင်တဲ့ မိစ္ဆာဝါဒ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » လူသားတို့ အတွက် အဆိုးယုတ်ဆုံးသော တ၇ားတွေ မို့ လို့လူမှန်၇င် အသိဥာဏ်၇ှိ၇င် –မှားတယ်လို့ ၇ဲ၇ဲ ပြောနိုင်တဲ့ မိစ္ဆာဝါဒ
လူသားတို့ အတွက် အဆိုးယုတ်ဆုံးသော တ၇ားတွေ မို့ လို့လူမှန်၇င် အသိဥာဏ်၇ှိ၇င် –မှားတယ်လို့ ၇ဲ၇ဲ ပြောနိုင်တဲ့ မိစ္ဆာဝါဒ
Posted by ---မိုးကျေ၇ွှကိုယ်-----dennis rockstar on Nov 25, 2012 in Buddhism, Science & Religion | 15 comments
အယူဝါဒမတူလို့၇ှုတ်ချတာ မဟုတ်ပါ ။ လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့လူသားမျိုးနွယ်တွေ၇ဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ဖျက်ဆီးတဲ့ အ၇ာတွေမို့နိုင်၇ာတာဝန်ထမ်းတဲ့ အနေနဲ့လုပ်တာပါ။ မကျေနပ်တဲ့ သူ မကျေနပ်သလိုသာ နေကြပါ။
(၂) ဘုရားက လူကိုသတ်မှ ပါဏာတိပါတလို့ ဟောတယ်။ တိရစ္ဆာန်သတ်ရင် ကံမထိုက်ပါဘူး။ အစိုးရပစ္စည်းဟာ လူ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကို ခိုးလို့ ကံမထိုက်ဘူး။ ကာမဂုဏ်မှားယွင်းကျက်စားမှုဟာ ကိုယ့်ကာမပိုင်မဟုတ်သူကို မေထုန်ပြုမှုလို့ အဓိပ္ပာယ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀မဟုတ်တဲ့အရာတွေကို မမှန်တာပြောလည်း လိမ်ရာမကျဘူး။ မုသာဝါဒမဖြစ်ဘူး။ လိမ်ကောင်းတယ်။ မူးအောင်မသောက်ရင် အရက်သောက်တာက မိတ်ဆွေပေါလို့ စီးပွားဖြစ်တော့ အကျိုးတောင် ရှိပါသေးတယ်။ ဒီလိုသောက်တာကို ဘုရားက သုရာမေရယလို့ ဟောတာမဟုတ်ဘူး။
(၃) ဘယ်တရားမှ မရချင်နေ။ ရှေ့ဘ၀၊ နောက်ဘ၀ကိုတော့ မတွေးရဘူး။ ရှေးဘ၀၊ နောက်ဘ၀ တွေးတဲ့သူဆိုရင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ ဆိုပြီးသကာလ ကျုပ်တို့နဲ့ ပဋိပက္ခအရာမှာ ရှိတယ်။
(၄ လေးသင်္ချေ၊ ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ကျင့်ပြီးမှ ပေါ်ထွန်းလာသော ဗုဒ္ဓသည် မှားယွင်းသောကြောင့် မိစ္ဆာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀တစ်ခုတည်း၌ ဉာဏ်ဖြင့် ဖောက်ထွင်းသိမြင်သော ဗုဒ္ဓသာလျှင် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖြစ်သည်။ ဘ၀သံသရာဟူသည်မရှိ။ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀တစ်ခုသာ ရှိသည်။
(၅) ဂေါတမဘုရားရှင်သည် ကိလေသာမကုန်သေး။ လောဘ။ တဏှာ၊ ကိလေသာရှိသေးသည်။
(၆) ပါဏာတိပါတသိက္ခာပုဒ်အရ လူ့အသက်သတ်မှ အပြစ်ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်များအသက်ကိုသတ်လျှင် ငရဲမကြီးချေ။ အကြောင်းမူ ဗုဒ္ဓသည် အသားစားခြင်းကို ခွင့်ပြုထားသောကြောင့် သတ္တ၀ါ၏ အသက်သတ်ခြင်းကိုလည်း ခွင့်ပြုရာ ရောက်သည်။ (ဒီနေ၇ာမှာ ဦးဥာဏတို့ က င၇ဲ ဆိုတာကို လက်မခံဘူးလို့ထပ်တလဲလဲ ပြောထားပေမယ့် င၇ဲ မကြီးချေဆိုတဲ့စကားနဲ့ င၇ဲ ကို လက်ခံထားပြန်ကြောင်း ထူးဆန်းအံသြဖွယ်တွေ့ ၇ှိ၇ပါသည်။သို့ သော် ကျတော်အခုဆွေးနွေးမှာက အဲ့ဒီအပိုင်းမဟုတ်လို့မပြောလိုတော့ပါဘူး)
(၇) ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးတည်းပိုင် ပစ္စည်းကို ခိုးယူလုယက်ခြင်းသည် အပြစ်ရှိသည်။ အများပိုင်ပစ္စည်းကို ခိုးယူလျှင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူများမှာ ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိသောကြောင့် အပြစ်မရှိ။
(၈) ကာမပိုင်အမျိုးသမီးကို သဘောတူပျော်ပါးရာ၌ အပြစ်မရှိ။ ဆန္ဒကို ဖြည့်စွမ်းပေးသောကြောင့် ကုသိုလ်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတော်ကောင်းတို့ ၏ မဂ္ဂင် အကျင့်ဟုပင် ယူဆနိုင်သည်။
(၉) မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက် အကျိုးအတွက် လိမ်လည်ပြောလျှင် အကုသိုလ်ဖြစ်သည်။ အများကောင်းကျိုးအတွက် လိမ်လည်လျှင် အပြစ်မရှိ။
မိုးပြာဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ဦးဥာဏ၏ နောက်ခံ
လွန်ခဲ့သည့်ကာလ (၂၅) နှစ်က ဦးဥာဏသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း မင်းကွန်း ရွှေမြင်တင်တောင်မှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပါသည်။
တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတော်မှာလဲ သူတို့ပင် ရှုံခဲ့၍ ထောင် သုံးနှစ်ကျခဲ့ပါသည်။
( အထူးမှတ်စေလိုသည်မှာ ၄င်း ထောင်ကျသည့်ကိစ္စမှာ အာဏာဖြင့် အတင်းဖိနှိပ် အကြပ်ကိုင်ထောင်ချခြင်းမဟုတ်၊ ဥပဒေဖြင့် မညီသောကြောင့်သာ ထောင်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအား ဖျက်ဆီးသောကြောင့်မဟုတ်။ လူသားမျိုးနွယ်တို့ အား စိတ်ပိုင်းဆိုင်၇ာအ၇ မှားယွှုင်းသော အယူဝါဒတို့ ဖြင့်ဖျက်ဆီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ )
၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်သာသနာတော်ကြီး စော်ကားခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဖန် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စ၍ ယခုတိုင်အောင် ဆက်တိုက်ပင်သာသနာတော်ကြီးကို ဖျက်စီးခံနေရပါပြီ။
ပစ္စုပ္ပန်ကမ္မ၀ါဒ အမည်ခံဂိုဏ်းကြိးသည် ပညာရှင်အင်အား ဘာသာဝင်အင်အား ငွေကြေးအင်အား
မိုးပြာဂိုဏ်းမှ တရားမ၀င် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိထားသည့် စာအုပ်ပေါင်းမှာ ၆၀ ကျော်ရှိပြီး ၎င်းတို့မှ အချို့မှာ –
၂၀။ ဥတ္တရိမနုဿဓမ္မဒဿန စာစဉ်-၂ (စာမျက်နှာ ၇၁၊ ထုတ်ဝေနှစ် ၂၀၀၃၊ ဗုဒ္ဓဘာသာက မယူသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ- ကမ္မဿကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်-ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀- ဦးနှောက်၏ ချွတ်ယွင်းဖောက်ပြန်မှုများ – လေးမျိုးစု)၊
– သျှင်မိုးပြာ (ခ)ရှင်မိုးပြာ
လောကတွင် လူ၎ မျိုး၇ှိသည်ဟု ဗုဒ္ဓက ဟောခဲ့ ပါသည်။
-လူယုတ်မာထက် ယုတ်မာတဲ့ သူ
-သူတော်ကောင်းထက် ကောင်းတဲ့ သူ
သူတော်ကောင်းထက်ကောင်းတဲ့ သူဆိုသည်မှာ သူတော်ကောင်းအကျင့်ကို ကိုယ်တိုင် မကျင့်ကြံနိုင်သော်မှ ကျင့်ကြံသော သူတော်ကောင်း တို့့ကို ( လူ့ လောကအားကောင်းကျိုးဆောင်၇ွက်ကြသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ကို) အားပေးကူညီ ထောက်ပံ့သောသူအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
လူယုတ်မာထက် ယုတ်မာတဲ့ သူ ဆိုသည်မှာ လူယုတ်မာတို့ အား ယုတ်မာမှန်း သိလျက်နှင့် အားပေးသူ၊ ကူညီသူ၊ လူယုတ်မာအလုပ်ကို အားပေးသူ၊ လူယုတ်မာတို့ဘက်မှ ( လူ့ အခွင့်အေ၇း ၊ ဘာညာ စသည် အကြောင်းပြအသံကောင်းဟစ်ကာ)ကာကွယ်ပြောဆိုသူ တို့ ပါဝင်သည်။
ဥပမာ တစ်ခုပေးလိုပါသည်။ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ခွင့်၇ှိသည်မှာ လက်ခံပါသည်။ သိူု့ သော်–သို့ သော်—— ဆိုပါစို့— လူတော်တော်များများက မုဒိန်းကျင့်တာကို လက်မခံတဲ့ အချိန်မှာ၊ A က မုဒိန်းကျင့်တာကို ကောင်းတယ်လို့ လက်ခံတယ်။ ဒီအထိ ဘာမှ မပြစ် မဖြစ်သေးပါ။ ဒါပေမယ့် မြိန်၇ည် ရှက်၇ည် မုဒိန်းလိုက်ကျင့်နေ၇င်တော့ သူ့ ကို အေ၇းယူမလား။ သူလည်း သူ့ အမြင်နဲ့ သူ မုဒိန်းကျင့်တာပဲ လူ့ အခွင့်အေ၇း ဆိုပြီး ဒီအတိုင်းထားမလား———————-
အဲ့ဒီလိုပါပဲ။ လူတိုင်း မတူကွဲလွဲခွင့်၇ှိကြပါသည်။ သို့ သော်ကိုယ်ထိလက်ေ၇ာက်တော့ “မုဒိန်းမကျင့်ကြပါနဲ့ လို့ ” ———။ ကျတော်လည်း ကျတော့် အမြင်နဲ့ ကျတော် တင်ပြတာလေ။
ကျတော် ၀န်ခံပါသည်။ ကျတော်သည် သူတော်ကောင်းလည်း မဟုတ် ၊ သူတော်ကောင်းထက် ကောင်းတဲ့ သူလည်း မဟုတ်။
သို့ သော်— လူယုတ်မာ ထက် ယုတ်မာတဲ့ သူ မဖြစ်ချင်ပါ။
မကျေနပ်တဲ့ သူ မကျေနပ်သလိုသာ နေတော်မူကြပါလို့ ———
သူတို့ငြိမ်နေပြန်တော့လည်း လိုက်စတယ်။ နင်ကိုယ်၌ကိုယ်က ရန်ဖြစ်ချင်နေတာလား ဒါမှမဟုတ် သူ့လူကိုယ့်ဖက်သားလုပ် လိုက်ဖွနေတာလား တခုခုပဲ..။ ဖွချင်ရင် ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့ ရေးပါကွာ။ ဒီလိုမျိုး ကော်ပီပေ့စ်ဆိုတာ သူ့စာကို အကိုးအကား တခုအနေနဲ့ ပြန်တုံ့ပြန်တာမျိုးမှာ သုံးသင့်တာ။ စာက နေရင်းထိုင်ရင်းကြီး တက်လာတယ်၊ မကြာခင်မှာ မိုးပြာဂိုဏ်းသားတွေရဲ့ပို့စ် တက်လာမယ်။ နင်မကြေနပ်ရင် မိုးပြာဆိုက်ဒ်မှာ အဲဒီစာသွားတင်ပါလား။ ဒီဆိုက်ဒ်မှာ မိုးပြာအယူ ရေပန်းစားနေတာလည်းမဟုတ်…. ခက်တယ်ကွယ် နင်တို့ကြောင့် ထေရဝါဒ နာမည်ပျက်တယ်။
တရားအကြောင်း သိပ်နားမလည်ပေမယ့် တခုတော့ ထောက်ပြချင်ပါတယ်………..
အခုပို့ စ်က မိုးပြာပဲပြောပြော ဘာပဲပြောပြော တရားနဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းရယ်လို့ ထင်ပါတယ်…………
ဒါပေမယ့် ရေးသူ Profile Photo
နဲ့မိုးကျရွေကိုယ် ဆိုတဲ့နာမည် (အများနားလည်ထားတာကတော့ အဲ့နာမည်က Porn Site တွေမှာ သုံးနေကြနာမည်ပါ…..)
အဲ့ဒါက တမျိုးကြီးဖြစ်နေသလားလို့ ပါ………
ကျန်တဲ့ စာကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ရွာသူားများ မန့် ပါလိမ့်မယ်……
ဘ၀င်မကျတာလေးကို ၀င်မန့် မိတာပါ……………….
ဒီဆိုက်ဒ်မှာ မိုးပြာအယူ ရေပန်းစားနေတာလည်းမဟုတ်….
ခက်တယ်ကွယ် နင်တို့ကြောင့် ထေရဝါဒ နာမည်ပျက်တယ်။
အင်း အခုရက်ပိုင်း အငြင်းအခုန်ပွဲလေး လုပ်ထားလို့ နည်းနည်း ပင်ပန်းပြီး ဘယ်သူ့ပို့စ်မှ မသွားဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ အခုတော့ နည်းနည်းဝင်မန့်လိုက်ဦးမယ်။ အခုတလော မိုးပြာဆရာတွေ တော်တော် ငြိမ်နေပါတယ်။ ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်။ အခုတင်တဲ့ဟာလိုမျိုး ပို့စ်တွေဟာ အရင်ကလဲ တင်ပြီးပါပြီ။ တကယ်လို့ မိုးပြာဆရာတွေ လာရင်တော့ ဆောင်းပါးရှင် ရှင်းနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ မရှင်းနိုင်ရင် မလွယ်ပါဘူး။ တော်တော်များများလဲ သူတို့ကို အယူဝါဒရေးရာအရ မရှင်းနိုင်တာ တွေ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီကျရင်သာ တာဝန်ယူပါ။ သူ့ဟာသူ နေနေတာကို မရှင်းနိုင်ရင် မရဲပဲနဲ့ ကျွဲပြဲစီးလို့ မကောင်းပါဘူး။
ဘယ်လိုဖြစ်လို့ တင်ပြီးသား ဟာမျိုးကို အစလုပ်ပြီး ထပ်တင်သလဲ မသိပါ။ အမှန်တော့ ကျနော့်စိတ်ထင် အစက ဒီဆိုက်ဒ်မှာ မိုးပြာဝါဒတော်တော် ရေပန်းစားတယ် ထင်ပါတယ်။ ခုတလော သူတို့ကို တော်တော်လေး ဖိထားလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ စာရေးသူရေ သူတို့လာရင်သာ ကိုယ့်ဇတ်ကိုယ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ တခုတော့ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အတွေးအခေါ် သမားလို့ ထင်တတ်သူတွေဟာ ဆဲတာလောက်ကို မဖြုံပါဘူး။
ကဲ ကိုယ့်ဇတ်ကိုယ်နိုင် စေသတည်း။
ဟာ မေ့လို့ အခုမှ ကိုယ့်လူရဲ့ အရှေ့ပို့စ်တွေကို ခနလေး ပြန်ကြည့်တာ စကတည်းက ရွှေတိဂုံနဲ့ စလိုက်တာပဲ။ အဲဒီလို စာမျိုးကို မြင်ဖူးတယ်။ အရေးအသားကလည်း သံသယ မရှိပါဘူးလို့ ပြောထားပေမယ့် တော်တော်လေး သံသယရှိတယ်လို့ ပြောထားတဲ့ သဘောပဲ။ လေသံကို ကျနော် တော်တော် သံသယရှိတယ်။
ကျနော်က ကျနော့် သံသယကိုပဲ ပြောမယ်။ ဆောင်းပါးရှင်ကို ကိုကြောင်ကြီး ပြောတဲ့ ကွန်မန့်အတိုင်း ကျနော်လဲ သံသယရှိတယ်။ သူ့လူ ကိုယ့်ဘက်သား လုပ်လို့လဲ ရတာကိုး။ ကျုပ်စိတ်ထင် အရင်က တော်တော်လေး လှုပ်ရှားပြီး ပျောက်သွားတဲ့ မိုးပြာဆရာတယောက်နဲ့တောင် ဆင်နေသလိုပဲ။
ကျနော့် သံသယဆိုတော့ မှန်ချင်မှ မှန်မှာပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ နောက်ကို သူများပိုသံသယ မဖြစ်ရအောင် ကိုယ့်ဘက်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေပေါ့။(သတိ ပါစင်နယ် တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ပါ။ အမြင်ကို ပြောခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ်ဘူးဆိုလျှင်လဲ ရပါသည်။ နောက်တော့ စောင့်ဖတ်ရတော့မယ် ထင်သည်။)
ကျုပ်လိုငတုံးကဖတ်ကြည့် တော့ 
မိုးပြာကို ကြော်ငြာပေးနေတယ်လို့ မြင်တယ် ။
မိုးပြာစာအုပ်တွေကို ပြည့်ပြည့် စုံစုံ ကြော်ငြာထားတာပဲ
ဒါနဲ့ ……… ဘယ်မှာဝယ်လို့ ရလဲဟင် ?
ဒီမိုကရေစီကို.. အလွဲသုံးစားလုပ်.. သူတပါးဝါဒရေးရာ..အတွေးအခေါ်ကို.. ကိုယ်နဲ့မတူတိုင်း..ထိခိုက်စော်ကား..
ရေးသူပြောနေသူတွေဟာ.. သူတို့(မိုးပြာတို့)ရေးထားတဲ့စာအုပ်.. ထုတ်ပြန်ထားတဲ့.. ၀ါဒရေးရာစာအုပ်.. တအုပ်ကိုမှ.. ပြီးအောင်သေချာမဖတ်ပဲ… မိုးပြောဂျိုးပြောနဲ့.. လေဖမ်းရမ်းအုပ်နေတယ်ပဲ.. ထင်မိတယ်..
ဖတ်စရာလားဗျ..ကိုယ့်ထေရဝါဒ အခြေခံစာပေတောင် တအုပ်ပြည့်အောင် မဖတ်ဖြစ်ဘူး။ မန်းဂဇက်သတင်းစာဆို ဟုတ်တုတ်တုတ်..။
“(မိုးပြာတို့)ရေးထားတဲ့စာအုပ်.. ထုတ်ပြန်ထားတဲ့.. ၀ါဒရေးရာစာအုပ်.. တအုပ်ကိုမှ.. ပြီးအောင်သေချာမဖတ်ပဲ… မိုးပြောဂျိုးပြောနဲ့.. လေဖမ်းရမ်းအုပ်နေတယ်ပဲ.. ထင်မိတယ်.”
သဂျီး မရှင်း မရှင်းမလုပ်နဲ့ ကိုဆာမိပြောသလို “ပို့ စ်ပိုင်ရှင်ကိုပြောတာလား ကော့ မန့် ရေးသူတွေကိုပြောတာလား” ဆိုတာလေးလဲပြန်ဖြေပေးပါအုန်း
မန့်မလို့ဟာ ဘယ်သူ့ကိုပြောမှန်းမသိပဲ အားနာစရာတွေဖြစ်မှာဆိုးလို့ မနက်ဖြန်မှပြန်လာကြည့်အုန်းမယ်
မိုးပြာစာအုပ်တွေ ဖတ်ချင်ပေမယ့် မအားလို့ မဖတ်နိုင်ပါဘူး။ လေ့လာပါ ဆိုတော့လဲ ကျနော့်အနေနဲ့ လေ့လာလောက်စရာလို့ကို မမြင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့်မို့ သူကြီးရဲ့ မိုးပြာဆရာတွေကို တွေ့ရင် သူတို့ရဲ့ အယူဝါဒကို မေးကြည့်ရတာပေါ့။ ဝေဖန်သူက လေဖမ်းရမ်းအုပ်တယ်ပဲ ထားပါအုံး။ သူကြီးရဲ့ မိုးပြာဆရာတွေကလဲ ဆောင်းပါးတိုင်းမှာ သူများဆီက ကူးယူဖော်ပြပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ရေး မဟုတ်ပါလို့ တပ်ထားတာချည်းပဲ။ အဲဒါမှ တာဝန်ယူစရာ မလိုတော့သလို သူတို့ဝါဒကိုလည်း ပြောချင်တိုင်း ပြောပြီး တဘက်က ပြောမယ့်အကွက်ကို ပိတ်ပြီးသား ဖြစ်နေတာကိုး။ မေးလိုက်ရင်လည်း မိုးပြာဝါဒကို ရေးထားပြီး ဒီဝါဒအောက်တော့ အရောက်မခံပါဘူး ဆိုတာက ပါသေးတယ်။ အဓိကကတော့ မိုးပြာအယူဝါဒတွေကို တာဝန်ယူပြီး မဖြေချင်လို့ ခေါင်းရှောင်လိုက်တာ။
အဲဒီတော့ သူကြီးက သူတို့ပြောထားတဲ့ ဝါဒရေးရာစာအုပ်တွေ သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး တကယ်ကို ယုံကြည်ရင် သူကြီးချရေးလိုက်ပါ။ ကျနော်ကတော့ ကိုယ်တိုင် လာဆွေးနွေးပါမယ်။ ကတိတောင် ပေးနိုင်တယ်။ မရေးခင်တော့ သူကြီးလဲ တကယ် ယုံကြည်မှရေးပါ။ မိုးပြာဝါဒ အမှန်အကန်ပါဆိုတာ သူကြီးရဲ့ ဂိုဏ်းတူညီအကိုတွေဆီက ထောက်ခံချက်ပါရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ကျနော်က အမှန်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိုးပြာဆရာပါလို့ ရင်ကော့ပြီး ဆောင်းပါးရေးရဲတဲ့လူကို တကယ်ကို တွေ့ချင်တာ။ ကျနော် မသိတာတွေ မေးစရာ အများကြီး ရှိနေလို့။ ကိုယ်တိုင်ရေးပို့စ်တော့ ဖြစ်ရမယ်နော်။ တချို့က ကျနော်မိုးပြာလို့ ပြောပေမယ့် ပို့စ်တပုဒ်မှ မတင်တော့ သူ့မှာ ဘာမှတာဝန်မရှိဘူး။ အဲဒီလို လူမျိုးလည်း မတွေ့ချင်ဘူး သူကြီးရေ။ တကယ်ကို့ မိုးပြာဆရာ အစစ်အမှန်နဲ့ကို တွေ့ချင်တာ။ စီစဉ်နိုင်ရင် စီစဉ်ပေးပါဗျာ။ ကျနော့် ထုံးစံအတိုင်း ချဲလင့်ခ် လုပ်ပါတယ်လို့။ အဲဒါလေး ပြောထားချင်ပါတယ်နော။(ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်းလေသံ)
ကျနော် အခုပြောတာတွေက တကယ့်ကို ယုံကြည်လို့ ပြောတာ သူကြီးရေ။ ကျနော့်စကားကို ကျနော် တာဝန်ယူပါတယ်။
ပို့ စ်ပိုင်ရှင်ကိုပြောတာလား ကော့ မန့် ရေးသူတွေကိုပြောတာလာခင်ဗျ
လိုအပ်တာထက်ပိုပြီး ရွာဆူရင်လည်း အစွန်းရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ ။
ကိုဆာမိကလဲ ရေးတာပဲ ကြာလှပြီ။ သူကြီးအကြောင်း မသိတာ ကျနေတာပဲ။ တစိမ်းဆန်လိုက်တာ။ သူကြီးက အဲဒီလို မထိတထိ ပြောတာလောက်တော့ ခေါင်းထဲ ထည့်မနေနဲ့။ သူလဲ လစ်ဘရယ် ဒီမိုဆိုပြီး မလိုတမျိုး လိုတမျိုး လုပ်တတ်တာပဲဟာကို။ အဲဒီတော့ သူပြောတာကို ပြောချင်ရင် ပြန်ပြောလိုက်။ မပြောချင်ရင် စဉ်းစားမနေနဲ့။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို ကိုယ့်အကြောင်းပြချက်နဲ့လုပ်။ ကိုယ့်ဇတ်ကိုယ် နိုင်ပစေပေါ့။
လစ်ဘရယ် ဒီမိုဆိုတာ ဒီလိုဗျ။ ကိုယ်ကပြောချင်ရင် ဒါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မဟုတ်ဘူး။ မူကိုဝေဖန်တာ။ သူများက ကိုယ့်ကိုပြောရင် ဥပဒေကို လက်တလုံးကြားလုပ်သူ ဘာညာပေါ့။ လိုအပ်ရင် ဖျက်ပစ်လိုက်။ ဒါ လစ်ဘရယ် ဒီမိုဝါဒအရဆိုပြီးပေါ့။
အခု ပြောနေတာတွေဟာ real life ကိုဝေဖန်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂေဇက်မှာ ပြုမူလုပ်ရှားနေတဲ့ virtual life ကိုဝေဖန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် စကားပြော လောသွားလို့ နောက်ကျမှ ပြန်ရှင်းတာပါ။
ပိုစ့်ထဲပါတဲ့ မိုးပြာစာအုပ်လေးတွေရရင်တော့ ဖတ်ချင်တယ်…။
ဘယ်မိုးပြာကိုယ်တော်ကများ ဓမ္မဒါနပြုမလဲလို့ စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း….။
မိုးပြာ ကိုယ်တော်တော့ မဟုတ်ဘူး ဦးဦးပါ ရေ..
စာအုပ်လေး တစ်ချို့တော့ ရှာပေးလိုက်မယ်..
ဦးဉာဏ ရေးတဲ့ဟာ တစ်ချို့ပေါ့..။